နိုင်ငံကောင်းစား ဖို့ အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ မြောက်ဒဂုံက သူရဲကောင်း ညီလေး အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ် ဝမ်းနည်း နေတဲ့ ဟဲလေး နဲ့ ရန်ရန်ချမ်း – GaMone Media
Homepage / Celebrity / နိုင်ငံကောင်းစား ဖို့ အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ မြောက်ဒဂုံက သူရဲကောင်း ညီလေး အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ် ဝမ်းနည်း နေတဲ့ ဟဲလေး နဲ့ ရန်ရန်ချမ်း
နိုင်ငံကောင်းစား ဖို့ အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ မြောက်ဒဂုံက သူရဲကောင်း ညီလေး အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ် ဝမ်းနည်း နေတဲ့ ဟဲလေး နဲ့ ရန်ရန်ချမ်း
ပြည်သူတွေကတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေး ကို ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ သူရဲကောင်း စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဆက်လက်ဆင်နွှဲလျက်ရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီး ဖြိုခွင်းခံရမှုတွေ​ကြောင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းတွေလည်း များစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာလည်း မြောက်ဒဂုံ၊မြိတ်မြို့နဲ့ မန္တလေးစတဲ့ နေရာမှာ နွေဦးတော်လှန်ရေးပြုလုပ်ကြရင်း ပြည်သူအချို့ အသက်ပေး သွားခဲ့ရပါတယ်။ ပြည်သူတွေကတော့ ယနေ့မှာ ဆုံးပါးသွားကြတဲ့ ရဲရဲတောက်သူရဲကောင်းတွေအတွက် အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။
နိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ မြောက်ဒဂုံက သူရဲကောင်း ညီလေးရဲ့ ဇနီးသည်ဟာ ၂လသားအရွယ် ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ဟဲလေးနဲ့ ရန်ရန်ချမ်းတို့၂ယောက်ဟာ ​ နွေဦးတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရင်း မြောက်ဒဂုံမှာကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းညီလေးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ် ဝမ်းနည်းမိကြောင်း ဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ဟဲလေးကတော့ ” ဒဂုံမြောက်အတွက်နာကျင်ရပြန်ပြီ​ကောင်းရာသုဂတိလားပါ​စေညီ​လေးရယ် “ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတဲ့အကြောင်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ
ရန်ရန်ချမ်းကတော့ “မြောက်ဒဂုံကရော / မြိုင်ကရောညီလေးတွေရေ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ကြပါစေကွာ ဒီမနက်ဘာသံမှမကြားရလို့ စည်းရုံးပေးရာလည်းရောက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလည်းဖြစ်မယ့် post လေးတွေတင်နေတာ sorry ပါကွာ……. ငါတို့ဘယ်တော့မှပေါ့မသွားဘူး ဂတိပေးတယ် ” ဆိုပြီး မြောက်ဒဂုံမှာ အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်း ညီလေးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ဝမ်းနည်းမိကြောင်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ နွေဦးတော်လှန်ရေးကို အားမာန်အပြည့်ဆင်နွှဲနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံး ဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေကြောင်း အမြဲ ဆုတောင်းပေး လျက်ရှိနေပါတယ်။
ျပည္သူေတြကေတာ့ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ကို ရဲရင့္ျပတ္သားတဲ့ သူရဲေကာင္း စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိေနခဲ့တာပဲျဖစ္ၿပီး ၿဖိဳခြင္းခံရမႈေတြ​ေၾကာင့္ ေႂကြလြင့္ခဲ့ရတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြလည္း မ်ားစြာရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔မွာလည္း ေျမာက္ဒဂုံ၊ၿမိတ္ၿမိဳ႕နဲ႔ မႏၲေလးစတဲ့ ေနရာမွာ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးျပဳလုပ္ၾကရင္း ျပည္သူအခ်ိဳ႕ အသက္ေပး သြားခဲ့ရပါတယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ယေန႔မွာ ဆုံးပါးသြားၾကတဲ့ ရဲရဲေတာက္သူရဲေကာင္းေတြအတြက္ အလြန္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေပးသြားခဲ့ရတဲ့ ေျမာက္ဒဂုံက သူရဲေကာင္း ညီေလးရဲ႕ ဇနီးသည္ဟာ ၂လသားအ႐ြယ္ ကိုယ္ဝန္ကို လြယ္ထားရပါတယ္။ ယခုမွာေတာ့ ဟဲေလးနဲ႔ ရန္ရန္ခ်မ္းတို႔၂ေယာက္ဟာ ​ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲရင္း ေျမာက္ဒဂုံမွာက်ဆုံးသြားတဲ့ သူရဲေကာင္းညီေလးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း ဖြင့္ဟလာခဲ့ပါတယ္။ဟဲေလးကေတာ့ ” ဒဂုံေျမာက္အတြက္နာက်င္ရျပန္ၿပီ​ေကာင္းရာသုဂတိလားပါ​ေစညီ​ေလးရယ္ “ဆိုၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတဲ့အေၾကာင္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ
ရန္ရန္ခ်မ္းကေတာ့ “ေျမာက္ဒဂုံကေရာ / ၿမိဳင္ကေရာညီေလးေတြေရ ေကာင္းရာမြန္ရာေရာက္ၾကပါေစကြာ ဒီမနက္ဘာသံမွမၾကားရလို႔ စည္း႐ုံးေပးရာလည္းေရာက္ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလည္းျဖစ္မယ့္ post ေလးေတြတင္ေနတာ sorry ပါကြာ……. ငါတို႔ဘယ္ေတာ့မွေပါ့မသြားဘူး ဂတိေပးတယ္ ” ဆိုၿပီး ေျမာက္ဒဂုံမွာ အသက္ေပးသြားခဲ့ရတဲ့ သူရဲေကာင္း ညီေလးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ဝမ္းနည္းမိေၾကာင္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ေရးသားထားခဲ့ပါတယ္။ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကို အားမာန္အျပည့္ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံး ေဘးရန္ကင္းရွင္းၾကပါေစေၾကာင္း အၿမဲ ဆုေတာင္းေပး လ်က္ရွိေနပါတယ္။
Previous post ဆန္ဒတွေ ကို ထုတ်ဖော် နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် MASK နဲ့ လက်သန့်ဆေးရည်များ လှူဒါန်း ခဲ့တဲ့ နန်းမွေစံ
Next post ပရိသတ်တွေ စိတ်မပူစေဖို့ လုံခြုံ စိတ်ချတဲ့ နေရာ မှာ ရှိနေ ကြောင်း STYLIST တစ်ဦး မှ ရိုက်ကူး ထားတဲ့ ဒေါင်း ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်